Baanka Dhexe Ee Somaliland Oo Shaaciyey Doorka Ay Ku Leeyihiin Adeegyada ZAAD Iyo eDahab Ku Leeyihiin Qiimo-Dhaca Shillinka Somaliland – Wargeyska Saxafi
Baanka Dhexe Ee Somaliland Oo Shaaciyey Doorka Ay Ku Leeyihiin Adeegyada ZAAD Iyo eDahab Ku Leeyihiin Qiimo-Dhaca Shillinka Somaliland
Hargeysa, Somaliland, January 27, 2017 (Saxafi) – Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shaaciyey qaabkii shirkadda Telesom loo siiyey ruqsadda shaqo ee adeegooda ZAAD-ka, kaas oo ujeedadiisu ahayd in lacagaha la isugu xawilo oo qudha, balse aanay ku jirin in wax lagu kala iibsado, isla markaana lagu kaydsado lacagaha.
Agaasimaha Guud ee Baanka Dhexe ee Somaliland Md. Cabdillaahi Xasan Aadan oo warsaxaafadeed uu ku saxeexan yahay soo saaray, waxa uu jawaab kaga bixiyey qoraal ka soo baxay Telesom oo ay ku sheegtay in aannu Adeega ZAAD-ku qayb ka ahayn sicir-bararka, balse, Agaasimaha Guud, ayaa iftiimiyey in ZAAD-ka iyo E-DAHAB-ku door weyn ku leeyihiin sicir-barraka iyo hoos-u-dhaca ku yimmi shillinka Somaliland.
“(wareegtada Madaxweynaha ee lagu shaaciyey go’aanka xukuumaddu) ma ay ahayn wareegto si gaar ah u beegsanaysa adeegga ZAAD-ka, waxaanay ka kooban tahay 17 qodob, mana jirto meel si gaar ah loogu sheegay in Adeegga ZAAD-ku keligii sababay sicir-bararka dalka ka taagan, balse waxa marag-ma-doon ah in ZAAD-ku ka mid yahay labada adeeg ee cidhiidhiga geliyey isticmaalkii shillinka Somaliland. Waxa xusid mudan in dhaqaalaheennu ku shaqeyn jiray ka hor adeegga ZAAD-ka laba lacagood oo isbarbar socda, taasoo ay keentay duruufaha diblomaasiyadeed ee uu dalkani muddaba ku soo jiray. Dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee waaweyn, sida kala-iibsiga baabuurta, guryaha iyo dhulka, waxa lagula kala wareegi jiray lacagta doollar-ka, halka suuqyada hilibka, caanaha, khudradda, bas-raaca, makhaayadaha laga cunteeyo, kuwa laga shaaheeyo, ay ku shaqayn jireen oo keli ah Shillinka Somaliland. Sidoo kale dhammaan adeegyada xirfadaha hoose u baahan oo dhan waxa lagu kala qaadan jiray Shillinka Somaliland, haddii ay noqdaan kuuliga, wastaadka, nijaarka, xammaalka, iyo kuwa la midka ah. Adeegyada ZAAD-ka iyo E-Dahab ee doolarka ah waxa ay keeneen in baahidii doolarku kor u kacdo, tii loo qabay Shillinka Somaliland-na hoos u dhacdo,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Baanka Dhexe.
Waxa kaloo uu ka hadlay duruufihii keenay in lacagta doollarka lagu isticmaalo adeega ZAAD-ka, waxaannu yidhi; “Marka laga eego dhanka sharciga, ma jiro dal keliya oo adduunka ka mid ah oo uu ka dhaqangalay adeegga lacagaha moobillada oo ku shaqeeya lacag aan ahayn ta dalkiisa (legal tender). Waxa shirkadda Telesom mooggan tahay in 2009-kii duruuf gaar ah oo dalku ku jiray awgeed loogu oggolaaday in doolar lagu saleeyo adeeggan, oo ay kow ka ahayd in Shilinka Somaliland aanu wada gaadhsiisnayn dalka oo dhan, isla markaana loo siiyey sida xawaaladaha caadiga ah in lacagaha lagu diro, laguna helo (money transfer). Maanta tuulo kasta iyo degmo kasta oo dalka Somaliland ka mida Shilinka Somaliland wuu gaadhay, sidaas awgeed waa waajib sharci ah in dib-u-eegis lagu sameeyo wada-shaqaynta Shilinka Somaliland, doolarka iyo lacagaha telefoonnada.”
Agaasimaha Guud ee Baandka Dhexe, ayaa sidoo kale ka jawaabay warsaxaafadeed shirkadda Telesom ku sheegtay in aannu adeega ZAAD sabab u ahayn sicir-bararka, waxaannu yidhi; “War saxaafadeedka Telesom ee cinwaankiisu ahaa “Adeegga ZAAD sabab uma aha sicir-bararka”, waxa ay shirkadda Telesom ka muuqday in aanay fahansanayn kaalinteeda iyo ta Baanka Dhexe midna. Baanka Dhexe ee Somaliland waa kor-joogaha baannanka iyo hay’adaha maaliyadeed, shirkad gaar loo leeyahay oo uu kor-jooge iyo ruqsad-siiye u yahayna, kuma faani karto in ay is-barbar taagtey xilliyo gaar ah. Oggolaanshaha Baanka Dhexe siiyey sannadkii 2009-kii muu ahayn mid ruqsad u siinaya in adeeggani noqdo mid wax lagu kala iibsado, laguna kaydsado lacagaha, balse waxa uu ahaa mid u fasaxaya in lacagaha la isugu xawilo, sida xawaaladaha kaleba, kumana ay jirin xawaalad dibadeed, oo ay iyada ku dareen muddooyinka danbe iyaga oo aan xitaa oggolaansho soo weydiisan Baanka Dhexe (TAAJ International).
Marka intaa laga tago, Baanka Dhexe ee Somaliland isaga oo ka duulaya waajibaadkiisa uu Xeerka Baanka Dhexe u jidaynayo ee ku cad qodobka 4aad, faqraddiisa 4aad, xarfihiisa b, t, j, x, waxa uu u xil saaran yahay in uu sameeyo, qaato, iyo in uu fuliyo siyaasadda lacagta ee Somaliland, sidaas darteed xil ayaa ka saaran in uu isu dheelli tiro lacagta dalka iyo lacagaha qalaad. Baanka Dhexe ee Somaliland uma dhisna in uu is-hortaago hal-abuurka ganacsi ee muwaadiniinta Somaliland, balse waxa uu u taagan yahay in uu dhiirrigeliyo hana-qaadka iyo horumarka hay’adaha maaliyadeed ee dalka, isaga oo mar kasta ilaaliya dhawrsanaantooda, balse marnaba Baanka Dhexe uma oggola hay’adaha maaliyadeed in ay dumiyaan dhaqaalaha dalka ee ku tiirsan Shilinka Somaliland.”
Go’aanno dawladeed oo maamulka Telesom hore u diideen
Dhinaca kale, Baanka Dhexe ee Somaliland, ayaa soo bandhigay amar-diidooyin badan oo shirkadda Telesom samaysay oo khuseeya doorka ZAAD-ku ku leeyahay hoos u dhaca shillinka Somaliland iyo inay adeegooda ka saaraan in la isugu diro wax ka yar $100.
“Sannadkii 2013-kii ayaa waxa Baanka Dhexe u soo if-baxay dareenka ah in adeegga ZAAD ee doolarka ahi saamayn ku yeeshay, isla markaana hoos u dhigay dhaqdhaqaaqii iyo qiimihii Shilinka Somaliland, laga soo bilaabo maalintaasna Baanka Dhexe wadahadal ayuu kula jiray madaxda sare ee Shirkadda Telesom, iyadoo af iyo qoraal-ba madaxda Baanka Dhexe ugu gudbiyeen in ay lacagaha yaryar ee loo adeegsado nolol-maalmeedka ay ka saaraan nidaamka ZAAD-ka ee doolarka ku salaysan. Sida ku cad wareegto uu soo saaray Guddoomiyihii hore ee Baanka Dhexe Mudane Cabdi Dirir Cabdi, oo summadeedu ahayd 16, kuna taariikhaysan 21/1aad 2015, waxa la faray shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil ee leh adeegyada ZAAD iyo E-Dahab in ay nidaamkooda ka saaraan $100 wixii ka yar (Boqol doollar) si isticmaalka shilinka Somaliland kor ugu kaco, hoosna loogu dhigo kor u kaca qiimaha doolarka, balse labada shirkadood midna ma ay fulin amarkaas.
Waxa kaloo jirtay in 25/6/2015, uu Baanka Dhexe ee Somaliland soo saaray wareegto tirsigeedu yahay 1/2015 oo dhammaan xawaaladaha dalka lagu faray in 30% lacagaha dibadda macaamiisha looga soo diro loogu beddelo Shilinka Somaliland, balse nasiib-darro qorshahaasi oo la doonayey in qiimaha Shilinka Somaliland kor loogu soo qaado uu ka fuli waayey xawaaladda moobilka tooska ugu soo dhacda ee dibadda ka timaad oo aan soo marin xafiis xawaaladeed, taasi oo ah TAAJ, oo hoos timaadda Shirkadda Telesom. Waxa xusid mudan in Guddoomiyihii Baanka Dhexe ee xilligaas oo ahaa Mudane Cabdillaahi Xaaji Jaamac Cali uu u qoray qoraal uu kaga dalbanayo in ay xawaaladdaasi la jaan-qaaddo fulinta nidaamka 30%-ka lagu sarrifayo Shilinka Somaliland, sida xawaaladaha kale, balse shirkadda Telesom dhag-jalaq umay siin fulinta qoraalka Baanka Dhexe – xitaa qoraal ahaan kagama ay soo jawaabin.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu 3/12/2015-kii magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo ka soo talo bixisa qiima dhaca Shilinka Somaliland iyo sicir-bararka, oo kala ahaa Madaxweyne-ku-xigeenka oo ahaa Guddoomiyaha Guddida, Wasiirka Maaliyadda oo ahaa Guddoomiye-ku-xigeenka, iyo Wasiirka Madaxtooyada, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Guddoomiyaha Baanka Dhexe oo xubno ka ahaa. Guddidaasi kadib markii ay xogo badan ururiyeen, waxa soo if-baxday in adeegyada ZAAD iyo E-Dahab ay qayb weyn ka yihiin qiima dhaca Shilinka Somaliland, waxaanay guddidu kulamo la yeesheen madaxda sare ee labada shirkadood ee Telesom iyo Dahabshiil, iyaga oo ku hor maray shirkadda Telesom, waxaanay guddidu u soo bandhigtay in ay nidaamkooda wixii ka yar $100 ka saaraan, una guuraan Shilinka Somaliland, taas oo ay ku gacan saydheen kana dhega-adaygeen.”
Baanka Dhexe oo amray Telesom inay go’aanka dawladda sida uu yahay u fuliso
“Ugu danbeyntii, sida ka muuqata War saxaafadeedka shirkadda Telesom soo saart (maalintii Arbacada) 25/01/2017, waxay ku doodeen in caqli ahaan, farsamo ahaan, iyo sharci ahaan toona muddo 48 saacadood ah nidaamka aan lagaga saari karin wixii ka yar $100, jawaabta Baanka Dhexe waa sidan hoos ku qoran:
1. a) Caqli ahaan in ay suuragal tahay, isla markaana fulinteedu tahay lama-huraan, waxa markhaati ka ah shacbiweynaha Somaliland ee Baanka Dhexe wakiilka uga yahay maaraynta iyo qiime u yeelista shilinkooda oo ah Astaan Qaran, oo Qarankani la’aanteed aanu jiri karin, waxaana caqliga saliimka ah garan karaa in ay waajib ku tahay Baanka Dhexe in uu soo saaro wareegtooyin muddaysan isaga oo sharciga u raacaya.
b) Shilinka Somaliland waa lacagta dalkani leeyahay, ee miisaaniyadda Qarankani ku salaysan tahay, waxaana lagu bixiyaa mushaharka shaqaalaha, ciidammada qaranka ee kala duwan, kharashka hawl-socodsiinta Dawladda Dhexe iyo dawladaha hoose, waana waajib qaran in uu qiime yeeshaa oo aan laga guurin adeegsigiisa, laguna niyad-samaado. Waana sida uu dhigayo caqliga saliimka ahi.
2. Farsamo ahaan, waa amar fulintiisu suuragal tahay in nidaamka ay ka saaraan wixii ka yar $100 (Boqol doollar) muddo 48 saacadood ah (Siddeed iyo Afartan Saacadood), marka la eego baaxadda shirkadda, laamaha ay ku leedahay dhammaan gobollada iyo degmooyinka, iyo tuulooyinka dalka.
3. Sharci ahaan sida uu dhigayo Cutubka 5aad, qodobkiisa 32aad ee Xeerka Baanka Dhexe waxa uu qeexayaa in Shilinka Somaliland yahay halbeegga lacagta sharciga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland (Legal tender), sharcigaas oo dhaqan-gal ahaa laga soo bilaabo sannadkii 1994-kii, wax ka beddal iyo kaabisna lagu sameeyey 2012-kii, islamarkaana uu ansixiyey Golaha Wakiilladu 2/4/2012, madaxweynuhuna ku soo saaray Xeer Madaxweyne 12/4/2012, isla markaana waafaqsan Qodobka 17aad ee Dastuurka Qaranka Somaliland.
Guntii iyo gebo-gebadii, Baanka Dhexe ee Somaliland isaga oo tixraacaya go’aanka Golaha Wasiirrada ee tirsigiisu yahay 212aad ee ku taariikhaysan 24/01/2017 iyo Wareegtada Madaxweynaha ee summaddeedu tahay JSL/M/WM/222-4504/01/2017 ee isla 24/01/2017 ee lagu dhaqangelinayo go’aanka Golaha Wasiirrada iyo Wareegtada Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee summadeedu tahay Gov-26/15/2017 ee ku taariikhaysan 25/01/2016 waxa uu Shirkadda Telesom ku adkaynayaa in sida uu yahay ay u fuliyaan. Sidoo kale waxa uu Baanka Dhexe ee Somaliland uu ku wargelinayaa shacbi weynaha JSL inay la socdaan go’aankaasi fulintiisu inay tahay waajib qaran,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Baanka Somaliland Md. Cabdillaahi Xasan Aadan.
January 28, 2017 January 28, 2017 Wargeyska SaxafiBaanka Dhexe, Dahabshiil, Dollar, eDahab, Sarrifka Lacagaha, Shillin Somaliland, Sicir Bararka, Telesom, Zaad
Previous Previous post: Trump Signs Order To Withdraw US From Trans-Pacific Trade Deal
Next Next post: Tens Of Thousands In U.S. Cities Protest Trump Immigration Order